ZVIMWE ZVINOKOSHA: Martin Vrijland
Kutyisidzira kwenyukireya kweNorth Korea nekushusha kukuru kune vanhu
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	pa 11 May 2017	• 29 Comments
Kwemavhiki mashomanana apfuura, nhau kuwedzera kune sarudzo dzeFrance dzakatarira kuhondo dzeAmerica kutyisidzira kurwisana neNorth Korea. Izvo nyika inowanzova nengozi zvikuru nokuti inenge ichibatanidzwa mukusimbiswa kwezvombo zvenyukireya uye iyo ndeyechokwadi isingadikanwi kana iwe uchidaidzwa kuti America, asi rakanaka kune [...]
Iwe haufaniri kupikisa urongwa, asi iwe unofanirwa kubudirira kuburikidza nawo
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	pa 2 May 2016	• 1 Comment
Vanhu vazhinji vanofunga kuti haufaniri kupikisa "chirongwa", asi unofanira kuwana nzira dzekubudirira. Iwe unogona, sezviri, uwane nzira dzekuwana mari mukati kana mukati memamiriro ayo mukati mezvino. Kunyange zvazvo zviri chokwadi ndezvekuti kana iwe uchinge uchishungurudza dambudziko remhepo, izvi [...]
Chii chakashata nemafungiro ehurumende yenyika?
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	musi wa 16 March 2016	• 16 Comments
Mubvunzo wandinowanzowanzo ndewe: "Chii chakashata nehurumende yenyika?" Dzimwe nguva chimwe chinhu chinowedzerwa: "Kunewo vanhu vakawanda vasina ruzivo vanoda kungotungamirirwa uye zvichiri kubatsira kana uri munyika yose mune mitemo yakafanana here? "Mibvunzo inonyanya kujeka, iwe ungati. Izvozvo [...]
Nano-tech yekugadzira zvokudya uye Google kutsvaga kusingafi
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	pana 27 February 2016	• 12 Comments
Google yakashandisa guru geneticist mukutsvaga kwake kusingafi. Google yakanyatsotarisana ne "mapeji emugwagwa" sezvainowanzotsanangurwa neRhumanismist Ray Kurzweil uyo akabudisa shoko rokuti 'kusina' uye anoti vanhu mu 2045 vanosvika pakusafa kwavo. Pakutanga ndakashuma kuti vakaona kuti DNA code inogona kugadziriswazve [...]
Izvo 'zvakapetwa zvakapetwa kaviri' nezvekunyengera kwechokwadi
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	pana 24 February 2016	• 20 Comments
Zvose zvakapoteredza iwe, kunyange muviri wako pachako, zvinongogadzirwa apo iwe unozviona. Icho ndicho chirevo chakashinga. Zvisinei, chirevo ichi chinotsigirwa nesayenzi inowanikwa mumunda wequantium physics. Nhamba yemasikirini pasi rose akadzokorora kuedza uku kutevera mazana emamwe, nokuti zvakatungamirira mukusava nekutenda kwakanyanya uye panguva imwechete yakashamiswa zvikuru. [...]
Iyo matrix haina kukosha, zvose zvinoitika mu 'pfungwa'
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	pana 22 July 2015	• 8 Comments
'Matrix haina kukosha, zvinhu zvose zvinoitika mupfungwa', ishoko randakaona vhiki ino uye ndakafunga kuti rakakosha. Kutaura pamusoro pematrice uye kuumbwa kwayo hakuna zvakakosha zvachose; Kufungisisa pamusoro pesimba rekugadzira panyika hazvina maturo; mhando dzose dzezviitiko zvinowanikwa mu [...]
Kubatana pakati pevanhu uye zvakabva
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	pana 12 June 2015	• 19 Comments
Kunyange zvazvo vanhu nokuda tsananguro wangu quantum wefizikisi uye "Double mutswe Experiment" (ona pano), mhedziso kungava kuti ndine deterministic kuona upenyu, apo zvose rinongova fungidziro uye kuti munhu chete anogona kugamuchira "chaicho" sechimiro chehologram kujekiti, ndeyokuti [...]
Mweya, mweya nemuviri: chii ichocho uye chii chavanoita?
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	musi wa 23 April 2015	• 46 Comments
Mumachechi akawanda, kusangana 'mudzimu, mweya nemuviri' dzimwe nguva kunotaurwa. Saka vanhu vazhinji vakanzwa nezvemashoko aya, asi zvichida zvakaoma kutsanangura maviri ekutanga, isu tose tinoziva kuti muviri chii. Ini pachangu ndakatsanangura muviri wedu se bio-computer uye [...]
Zvose pasi pezuva zviri mumutambo
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	musi wa 16 April 2015	• 9 Comments
'Zvose pasi pezuva zviri mumatope'; ndiro iro band Pink Pink Floyd iri kuimba rwiyo rwavo 'Eclipse'. Zvose pasi pezuva ndezve 'kutamba'. Vaizorevei nezvazvo? Ndakazvipira nenyaya yacho pamberi (ona pano), asi akafuridzirwa nhasi kudzoka kwairi. Kana zvose [...]
Unosunungura sei kubva mumatrice uye uchiri kurarama mukati maro?
Akaiswa mukati NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	musi wa 16 April 2015	• 4 Comments
MunaSeptember 2014 Ndakagamuchira - maererano nemashoko angu pamusoro pematrice - kakawanda mubvunzo unonyanya kuverenga: "Ndingazvibvisa sei kubva pamatrice uye ndinogona kurarama mukati mematrice?" Somuenzaniso, pane mumwe munhu Mubvunzo wakabvunzwa [quote] Ndave ndichida kwenguva yakati [...]
Kushanya kwakazara: 2.634.581